76154 Deviant ကင်းထိုးမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
76154 Deviant ကင်းတပ်
ထာဝရသရုပ်ဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ LEGO ကိုတုံ့ပြန်သည်။ Marvel သေးသေးလေး
19 / 11 / 2021 19 / 11 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 271 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel နိစ္စထာဝရ
သွန်း အင်္ဂါ Marvel Studios' Eternals သည် ၎င်းတို့၏ LEGO အသေးစားရုပ်ပုံများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ရိုက်ကူးထားပြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Lego Marvel 76156 Rise of the Domo သုံးသပ်ချက်
10 / 11 / 2021 10 / 11 / 2021 z ဇရ Wexler 354 Views စာ0မှတ်ချက် 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego Marvel, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Marvel, reviews
Dorito လား။ ပီဇာတစ်ချပ်? ဆာမိုဆာလား? မဟုတ်ဘူး - အဲဒါက နောက်ဆုံးထွက် LEGO ပဲလေ။ Marvel မော်ဒယ်၊ တြိဂံပုံ
နောက်ထပ်သုံး LEGO Marvel ရုပ်ရှင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ Eternals အစုံပါပဲ။
07 / 11 / 2021 07 / 11 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 315 Views စာ0မှတ်ချက် 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel စတူဒီယို
Eternals ၏နောက်ဆုံးထွက်အခန်းအဖြစ် ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ရုံတင်ပြသနေပြီဖြစ်သည်။ Marvel Cinematic Universe နဲ့ တစ်​ခုရှိပါ​သေးတယ်​
LEGO သည် လှည့်ကွက်တစ်ခုကို လှည့်စားခဲ့သလား Marvel စတူဒီယို 'ထာဝရများ?
07 / 11 / 2021 07 / 11 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 252 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, နတ်သမီး, Deviants များ, နိစ္စထာဝရ, Ikaris, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel, Sprite
Marvel Studios' Eternals သည် ယခုထွက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး LEGO အစုံလေးခု၏ နောက်ကွယ်မှ အရင်းအမြစ်နှင့် လှည့်ကွက်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ပြသထားသည်။
Do Eternals ၏ အဆုံးစွန်သော ခရက်ဒစ်ပြကွက်များသည် အနာဂတ် LEGO ဖြစ်နိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။ Marvel ရုပ်ပုံအသေးစားများ (SPOILER)
06 / 11 / 2021 07 / 11 / 2021 Matt Yeo ပါ 363 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76178 နေ့စဉ် Bugle, Adam Warlock ပါ, ဓါးရွက်, နိစ္စထာဝရ, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 3, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel နိစ္စထာဝရ, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel ရုပ်ပြ, Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvelထာဝရ, Thanos, လက်စားချေသူများ
ဒဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ Marvel's Eternals' သည် ယခုသီတင်းပတ်ကုန်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော LEGO ဇာတ်ကား၏ အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် မြင်ကွင်းများကို လုပ်ဆောင်ပါ။ Marvel အသေးစား
03 / 11 / 2021 03 / 11 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 321 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, နှောငျ့နှေး, နိစ္စထာဝရ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvelထာဝရ, Movie,, တုပ်ကွေးရောဂါ, ထာဝရ
01 / 10 / 2021 26 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 318 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, 76237 Sanctuary II ကို, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Lego Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel, Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel စတူဒီယို, Sets အသစ်များ, အောက်တိုဘာလ, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး
01 / 10 / 2021 01 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 248 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, 76237 Sanctuary II ကို, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Lego Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel, Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel စတူဒီယို, Sets အသစ်များ, အောက်တိုဘာလ, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး
01 / 10 / 2021 02 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 648 Views စာ0မှတ်ချက် 10290 Pickup ထရပ်ကား, ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft, 10293 Santa's ခရီးစဉ်, ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster, ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်, 40494 ပိုလာဝက်ဝံနှင့်လက်ဆောင်ထုပ်, 40498 ခရစ်စမတ်ပင်ဂွင်း, 40499 Santa's Sleigh, 42131 CAT D11T ဘူဒိုဇာ, 60293 တန့်ပန်းခြံ, 60294 Stunt ပြရန်ထရပ်ကား, 60295 Stunt Show Arena, 60296 ဘီးတန့်စက်ဘီး, 60297 ဖြိုဖျက် Stunt စက်ဘီး, 60298 ဒုံးပျံတန့်စက်ဘီး, 60299 တန့်ပြိုင်ပွဲ, 60309 Selfie တန့်စက်ဘီး, 60310 ကြက်သားတန့်စက်ဘီး, 60311 မီးသတ်တန့်စက်ဘီး, 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်, ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block, 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ၇၆၂၃၇ Sanctuary II: Endgame Battle, 76238 Classic တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ Batman သားလေး, ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown, Batman, City, Creator Expert, Dc, Disney, Ideas, Lego, Lego Batman, Lego CIty, Lego Creator Expert, Lego DC က, Lego Disney, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego Marvel, Lego ရာသီအလိုက်, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, LEGO.com, Marvel, ရာသီဉတုလိုက်သော, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group